Halyeey kooxda Liverpool ah oo ka digay in la dayaco Sadio Mane – Gool FM
(Liverpool) 11 Maajo 2022. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Jamie Redknapp ayaa uga digay maamulka Reds inay dayacaan xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane, xilli ay jiraan warar xaqiijinaya inay kooxo badan xiiseynayaan adeeggiisa.
Wararka ayaa tilmaamayay in kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ay xiisaynayeen adeega xiddiga reer Senegal kaas oo kula guulaystay Koobkii Qaramada Afrika bishiiFebruary ee la soo dhaafay.
Haddaba sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail ee dalka England Jamie Redknapp ayaa ka digay in la dayaco Sadio Mane, wuxuuna yiri:
“Sadio Mane looma ogolaan karo inuu baxo.”
“Mane wuxuu dejiyaa laxanka ciyaarta, wuxuuna leeyahay xirfad kasta oo farsamo oo aad rabto, aad ayaan ula dhacay qaabkiisa.”
“Waxaa laga hadlayaa rabitaanka Bayern Munich ee ku aadan saxiixiisa, ma fasaxi kartid isaga, wuxuu muhiim u yahay sida Luis Diaz ama Mohamed Salah.”
Yeelkeeda, Sadio Mane ayaa Reds ku soo biiray 2016 isaga oo kaga soo biiray kooxda Southampton, tan iyo markaas waxa uu kooxda la ciyaaray 265 kulan tartamada oo dhan ah, isaga oo u dhaliyay 118 gool, sidoo kale caawiye ka noqday 47 gool kale ay dhaliyeen saaxiibadiis.
Mane wuxuu kooxda Liverpool kula guuleystay koobab ay ka mid yihiin horyaalka Premier League, Carabao Cup, UEFA Champions League, UEFA Super Cup, iyo Koobka Kooxaha Adduunka ee Club World Cup.
Nasser Al-Khelaifi oo dhinac u riday mustaqbalka Kylian Mbappé ee kooxda Paris Saint-Germain